ဒူဒူကြီး: Fire detecting system
Fig. Fire detection systems ရဲ့ master control panel
Fig. Fire detection systems ရဲ့ repeater panel
Fire detection systems ရဲ့ master control panel ကို၊ bridge မှာတတ်ဆင်ထားလေ့ရှိပြီး၊ auxiliary panel တွေဖြစ်တဲ့၊ repeater panel တွေကိုတော့၊ engine control room နဲ့ fire control station တို့မှာ တတ်ဆင်ထားပါတယ်။ တတ်ဆင်ထားတဲ့ fire detector တွေကိုခွဲခြားကြည့်တဲ့အခါ၊ smoke detector, heat detector နဲ့ infrared flames detector တွေဆိုပြီး၊ တွေ့နိုင်ပါတယ်။ smoke detector တွေကို၊ engine control room နဲ့ engine room နေရာအနှံ့အပြားမှာ တတ်ဆင် အသုံးပြုကြ ပေမယ့်၊ work shop, boiler, incinerator နဲ့ fuel handling units တွေအနီးအနားမှာတော့၊ တတ်ဆင်အသုံးလေ့ မရှိ ပါဘူး။
work shop လို hot work area နေရာမျိုးမှာ welding works တွေကို၊ ဆောင်ရွက်ကြတာမို့၊ smoke နဲ့ neck flame တွေ အမြဲပေါါပေါက်နေတတ်ပြီး၊ smoke detector နဲ့ flame detector တို့ကို၊ တတ်ဆင်ဖို့ မဖြစ်နိုင်တာကြောင့် heat detector တွေကိုတတ်ဆင်ကြပါတယ်။ fuel handling unit တွေဖြစ်ကြတဲ့၊ purifier, oil heater အစရှိတဲ့ နေရာတွေ အနီးအနား မှာတော့ flame detector တွေကို၊ တတ်ဆင် ပါတယ်။
boiler နဲ့ incinerator တွေဟာ၊ abnormal condition အခြေအနေ တွေမှာ၊ neck flame တွေပေါါပေါက် တတ်တာမို့၊ infrared flame ဒါမှမဟုတ် ionization type smoke detector တွေကို၊ boiler နဲ့ incinerator တွေအနီးအနားမှာ၊ တတ်ဆင်အသုံးပြုကြပါတယ်။
smoke detectors တွေကို၊ Photoelectric smoke detectors နဲ့ Ionization smoke detectors တွေဆိုပြီး ခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။
Photoelectric smoke detector အလုပ်လုပ်ပုံကရိုးရှင်းပါတယ်။ chamber မှာ မူလပို့လွှတ်ထားတဲ့၊ အလင်းရောင်ပျောက် ကွယ်သွား မသွားကို၊ photo cell မှ စောင့်ကြည့်နေတဲ့၊ သဘောပါပဲ။ ဒါပေမယ့် low sensitivity detector ဖြစ်တာမို့ false alarm တွေဖြစ်ပေါါဖို့မလွယ်ကူပေမယ့်၊ smoke သိပ်များများလာမှ သာ တနည်းအားဖြင့် thick smoke ဖြစ်လာမှသာ၊ detector ဟာစတင် အလုပ်လုပ်ပါတယ်။
photo electric smoke detector တွေကို၊ low energy fire ဖြစ်နိုင်တဲ့နေရာတွေမှာသာ တတ်ဆင် အသုံးပြုဖို့သင့်လျှော်ပါတယ်။ low energy fire ဆိုတာက၊ မီးတောက် flame ကြီးကြီးမားမား မပေါါပေါက်ပဲ၊ မီးလောင်တဲ့အခါ thick smoke တွေအများအပြားထွက်လာတတ်တဲ့၊ မီးလောင်မှုမျိုးကိုဆိုလိုတာဖြစ် ပါတယ်။
သဘေ်ာတွေမှာတော့ engine room မှာဆိုရင်၊ engine control room လောက်မှာသာ တတ်ဆင် အသုံးပြုကြပြီး၊ accommodation က passage way တွေ၊ air cond room, bridge နဲ့ cargo control room အစရှိတဲ့နေရာတွေမှာ၊ တတ်ဆင်အသုံးပြုမှု ပိုများပါတယ်။
Image Credit to : http://extension.missouri.edu, http://www.firetronics.com.sg
Posted by ဒူဒူကြီး at 19:06